" ပရိသတ်တစ်ယောက်က သူမရဲ့ ပုံတူပန်းချီလေးကိုလက်တန်းဆွဲကာ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပြုလုပ်ပေးခဲ့လို့ အံ့သြပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့ Mary " - Cele Connections
” ပရိသတ်တစ်ယောက်က သူမရဲ့ ပုံတူပန်းချီလေးကိုလက်တန်းဆွဲကာ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပြုလုပ်ပေးခဲ့လို့ အံ့သြပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့ Mary “
CeleConnections ပရိသတ်ကြီးရေ Mary ကတော့ ဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့ တမူထူးခြားတဲ့ ဆိုဟန်အသံလေးနဲ့ ” သူသိသွားပြီ သီချင်းလေးကို Cover ပြန်ဆိုခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေအထူးစိတ်ဝင်စားကာ အောင်မြင်လာသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ထွက်ရှိတဲ့ သူမရဲ့ သီချင်းတွေဖြစ်တဲ့ မငိုပါနဲ့တော့ ၊ ဝဲ အစရှိတဲ့ သီချင်းတွေကလည်း ပရိသတ်တွေရင်ထဲကိုနေရာယူခဲ့တာပါပဲနော်။
Mary ကတော့ အမျိုးသား ပရိသတ်တွေရဲ့သည်းသည်းလှုပ်ဝန်းရံအားပေးခြင်းကိုခံရတဲ့သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် Ar-T နဲ့ တွဲဖက်သီဆိုထားတဲ့ Silent သီချင်းလေးဟာဆိုရင်လည်း ပရိသတ်တွေအထူးအားပေးနှစ်ခြိုက်ခဲ့ကြတဲ့ သီချင်းလေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေပါရိုက်ကူးနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ Mary တစ်ယောက် သူမရဲ့ ပရိသတ်တစ်ယောက်ကသူမရဲ့ ပုံတူပန်းချီလေးကိုလက်တန်းဆွဲကာ သူမရဲ့သီချင်းလေးနဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့် ” Wow I looovvvveee itttt!!! Thank you K.T.R Ar ” ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့ အံ့သြဝမ်းသာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ CeleConnections ပရိသတ်ကြီးထဲမှာရော Mary ရဲ့ပရိသတ်တွေရှိရင်မှတ်ချက်တစ်ခုခုပေးခဲ့ပါဦးနော်။
” ပရိသတျတဈယောကျက သူမရဲ့ ပုံတူပနျးခြီလေးကိုလကျတနျးဆှဲကာ ဗီဒီယိုဖိုငျလေးပွုလုပျပေးခဲ့လို့ အံ့သွပြျောရှငျခဲ့တဲ့ Mary ”
CeleConnections ပရိသတျကွီးရေ Mary ကတော့ ဘယျသူနဲ့မှမတူတဲ့ တမူထူးခွားတဲ့ ဆိုဟနျအသံလေးနဲ့ ” သူသိသှားပွီ သီခငျြးလေးကို Cover ပွနျဆိုခဲ့တာကွောငျ့ ပရိသတျတှအေထူးစိတျဝငျစားကာ အောငျမွငျလာသူလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။နောကျထပျထှကျရှိတဲ့ သူမရဲ့ သီခငျြးတှဖွေဈတဲ့ မငိုပါနဲ့တော့ ၊ ဝဲ အစရှိတဲ့ သီခငျြးတှကေလညျး ပရိသတျတှရေငျထဲကိုနရောယူခဲ့တာပါပဲနျော။
Mary ကတော့ အမြိုးသား ပရိသတျတှရေဲ့သညျးသညျးလှုပျဝနျးရံအားပေးခွငျးကိုခံရတဲ့သူပဲ ဖွဈပါတယျ။ဒါ့အပွငျ Ar-T နဲ့ တှဲဖကျသီဆိုထားတဲ့ Silent သီခငျြးလေးဟာဆိုရငျလညျး ပရိသတျတှအေထူးအားပေးနှဈခွိုကျခဲ့ကွတဲ့ သီခငျြးလေးတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ အခုနောကျပိုငျးမှာဆိုရငျ ရုပျရှငျဇာတျကားတှပေါရိုကျကူးနပွေီပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီနမှေ့ာတော့ Mary တဈယောကျ သူမရဲ့ ပရိသတျတဈယောကျကသူမရဲ့ ပုံတူပနျးခြီလေးကိုလကျတနျးဆှဲကာ သူမရဲ့သီခငျြးလေးနဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလေးပွုလုပျခဲ့တာကွောငျ့ ” Wow I looovvvveee itttt!!! Thank you K.T.R Ar ” ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့ အံ့သွဝမျးသာခဲ့တာတှရေ့ပါတယျ။ CeleConnections ပရိသတျကွီးထဲမှာရော Mary ရဲ့ပရိသတျတှရှေိရငျမှတျခကျြတဈခုခုပေးခဲ့ပါဦးနျော။
(၂၄) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ နိုင်ငံတကာက ပရိသတ်တွေဆီက မွေးနေ့ဆုတောင်းတွေများစွာကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ ပိုင်တံခွန်
အားတဲ့အချိန်လေး ဆိုင်ထိုင်ပြီး ပရိသတ်တွေဆီ Live လွှင့်ပြီး ဈေးရောင်းခဲ့ကြတဲ့ စိုးမြတ်နန္ဒာနဲ့ စိုးပြည့်သဇင်တို့ ညီအစ်မ
“ဒီရောဂါကပ်ဆိုးကြီးကြောင့် ခက်ခဲကုန်တဲ့ အရာအားလုံးကနေ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလာတဲ့ ယုန်လေး”